Mayelana Namaphupho Nezincazelo | AMAPHUPHO
Mayelana Namaphupho Nezincazelo
Mayelana namaphupho osikweni lwe-Afrika
Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwe-Afrika. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi ngamaphupho awumongo alombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho kuguquguquke ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa.
Osikweni lwe-Afrika, amaphupho axhumanisa abaphilayo nokhokho (namadlozi), nokhokho (namadlozi) nabo baxhumana kanjalo nabaphilayo. Kwesinye isikhathi amaphupho anikeza impendulo ezintweni umuntu azithandazele noma acele usizo lokuzixazulula, kodwa futhi angamane azifikele nje ukuzonikeza isiqondiso ezimpilweni zabantu. Amanye amaphupho acacile ngokuqondile, angachazwa kalula nje yilowo ophuphile, kodwa amaphupho ayinkimbinkimbi nangaqondakali angadinga usizo lwesangoma ukuwaqonda. Lokhu kuvamise lapho iphupho lihilela izenzo zabanye abantu noma lidinga ukuba ophuphile kube khona akwenzayo ukushweleza noma ukukhonza amadlozi.
Uma ufunda lezizincazelo, khumbula ukuthi okushiwo ngamaphupho akusiwo unqamulajuqu. Izincazelo kule-website zingaba yikho kokubili okoqobo noma izingathekiso. Amaphupho ayithuluzi lokuqonda impilo, hhayi ukubikezela ngekusasa ngokunembile futhi kufanele athathwe njengezinsiza zokusetshenziswa kanye nomqondo wakho ohluzekile nalokho okwenza umqondo kuwena.